Wararka Maanta: Khamiis, Jun 14, 2018-Madaxweyne Farmaajo oo Shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul-Fidriga
Khamiis, June, 14, 2018 (HOL)– Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u diray Hambalyada Ciidul Fitriga, isaggoo Sanadkaan kiisa xigga u rajeeyey in ay ku gaaraan caafimaad iyo nabad buuxda.
Madaxweynaha JFS, ayaa ciidamada qalabka sida, gaar ahaan ciidamada xasilinta uga mahad celiyey sida ay ugu dhabar adeegeen in Shacabka Soomaaliyeed ay ka difaacaan kooxda Alshabaab.
“Waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida, ciidamada xasilinta oo habeen iyo maalin u taagnaa siddii Shacabka Soomaaliyeed uga difaaci lahaayeen kooxaha nabada ka so horjeeda” ayuu yiri Madaxweynaha JFS.
Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo, ayaa Shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyey la shaqeynta ciidamada xasilinta, waxaana uu xusay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto siddii magaaladda Muqdisho loogu soo dabaali lahaa ammaan iyo xasilooni.
“Waxaan u mahad celinayaa Shacabka Soomaaliyeed oo la shaqeeyey ciidamada xasilinta oo u dul qaatay culeysyada uga yimid isu-socdka magaaladda, waxaa ay dowladda ka shaqeyneysaa siddii magaaladaan ay ugu soo dabaali laheyd ammaan iyo xasilooni, waa loo baahan yahay wada-shaqeynta ciidamada qalabka sida iyo Shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale sheegay “Waxaan uga dagayaa Al-shabaab in ay ka waan toobaan oo ay joojiyaan dhibka ay shacabka ku hayaan, waxaa ay dowladda ka shaqeyneysaa siddii ay ugu hortagi laheyd falalkaas argagixisinimada leh, ayna ku yareen laheyd dhibaatooyinka Shacabka Soomaaliyeed uga imaanaya Al-shabaab iyo kooxaha la mid ka ah yiri madaxweynaha Soomaaliya
6/14/2018 11:57 AM EST